U-Emtee uyaqhubeka nokukhipha izingoma ezishisa izikhotha | Scrolla Izindaba
U-Emtee uyaqhubeka nokukhipha izingoma ezishisa izikhotha
Omunye wezihlabani ezinkulu ze-hip-hop zaseNingizimu Afrika ezake zanandisa ngomculo, u-Emtee, ogama lakhe langempela nguMthembeni Ndevu, uyaqhubeka nokukhipha izingoma ezisezingeni eliphezulu.
U-Emtee ukwenza lokhu noma esehlukene nelebuli ayesayine kuyo, i-Ambitiouz Entertainment enezigemegeme.
Ngenkathi u-Emtee eshiya i-Ambitiouz ngowezi-2019, bekungashiwo kalula ukuthi ukuphela komsebenzi wakhe. Kodwa u-Emtee, odabuka e-Matatiele e-Eastern Cape, wenze okuphambene nalokho, ezisayina ngaphansi kwelebuli yakhe i: Emtee Records.
Ngokumangazayo, ukubhekana nokuphathwa kwebhizinisi elisha ngenkathi egxile emkhakheni wezomculo akukaze nakanye kwaholela ekwehleni kwezinga lomculo wakhe,futhi umculo wakhe uyaqhubeka nokuthuthuka ngokusobala.
Kusukela ashiya kulebuli edumile, u-Emtee usekhiphe izingoma ezishisa izikhotha, ezifana ne-“iThemba,” “i-Wave,” “i-Johustleburg” kanye nengoma yakhe yakamuva, “iLaqhasha,” okukhona kuyo uLolli Native noFlash nabo abasayinwe kwilebula yakhe.
Lezi zingoma ezine zingamaculo akwi-albhamu yakhe yesine, i-Logan, okulindeleke ukuthi iphume ngoLwesihlanu mhla ziyisishiyagalolunye kuNdasa, ngemuva kokuhlehlisa ukukhishwa kwayo ngoMbasa.
Ividiyo ka-Emtee yomculo ethi-“Wave” esibukwe ngabantu abangama-500k ku-YouTube, umemezele ku-akhawunti yakhe ye-Twitter ngoLwesine ukuthi uzoba nomcimbi wokukhipha i-albhamu, kanye nabaculi bakhe uLolli noFlash, e-Kroonstad, e-Free State ngoLwesihlanu.
Umthombo wevidiyo: i-YouTube
Umthombo wesithombe: Emteerecords